SHIRKADAHA CUNNADA EE UKRAINE AYAA SOO SAARI DOONA IIBSADAHA LEH EREYGA "ILMAHA" - MAQAALLO
Shirkadaha cunnada ee Ukraine ayaa soo saari doona iibsadaha leh ereyga "ilmaha"
Midkeen kasta wuxuu "ka yimaadaa carruurnimada" wuxuuna xasuustaa sida wax waliba hore u ahaa dhadhan iyo dabiici. Dad badan ayaa u maleynaya in sida ugu fiican loogu talagalay carruurta, iyo haddii badeecaddu tahay "ilmo," markaa, si waafaqsan, tayada, iyadoon wax dheeraad ah lagu darin iyo GMOs. Sida ay u soo baxday, ganacsatada Yukreeniyaanka ah ma seexan, waxayna isticmaalaan farsamadan maskaxiyan si firfircoon, marin habaabiso.
Qaar dadku way ogyihiin, laakiin sharciga Ukraine "ku saabsan macluumaadka macaamilka", oo dhawaan la ansixiyey ee Verkhovna Rada ee Ukraine, iyo xeerarka farsamo mamnuucay. Tani waxa ay sheegtey macalinka sayniska ee sayniska iyo maamulka amniga ee Jaamacada Jaamacadda ee Ganacsiga iyo Dhaqaalaha ee Elena Sidorenko, isaga oo intaas ku daray in aysan macquul ahayn in la isticmaalo magacyada aan loo xaqiijin shaqadooda. Taasi waa, haddii alaabadani aysan fulinin shaqooyinka ama ficillada lagu soo bandhigay baakadka, markaa tani waxay noqon kartaa mid ammaan ah oo loo arko inay tahay khiyaamo qayb ka mid ah soo saaraha. Waxay sidoo kale ku dartay in xeerarka qawaaniinta la xoojin doono oo keliya sababo la xiriira iswaafajinta xeerarka Yukreeniyaanka ee heerarka Midowga Yurub.
Tusaale ahaan, waxay soo xigatay sirta loogu yeero "baby". Sida laga soo xigtay iyada, iyada oo aysan jirin kiis iyaga lagu quudiyo carruurta, ugu yaraan sababtoo ah waxay ku jiraan nitrity sodium, taas oo loo aqoonsan yahay walax caadi ah oo bixiya hilibka hilibka leh midabka casaan.